dhoofiyaha dhagaxa Pumice - Moringa Wholesale Supplier Exporter | Private Label Moringa Manufacture | Moringa Powder - Moringa Leaves - Moringa Oleifera Capsule | Daun Kelor Grosir
Home / Info Lombok Gili / dhoofiyaha dhagaxa Pumice
Posted on November 8, 2021 November 8, 2021 by marlion llc
dhoofiyaha dhagaxa Pumice
Pumice Stone Supplier
Pumice For Horticulture
Pumice waa walxo aad u fudud, daloolin iyo wax xoqid ah waxaana loo isticmaali jiray qarniyo badan warshadaha dhismaha iyo qurxinta iyo sidoo kale daawada hore.
Waxa kale oo loo istcimaalaa sida naaxinta, gaar ahaan polishes, qalin-qoriyaasha, iyo soo saarista jiinis-dhagax-dhagax ah. Pumice waxa kale oo loo adeegsaday warshada samaynta buugaagta hore si loogu diyaariyo warqadaha xaashida iyo xidhitaanka maqaarka.
Waxaa jira baahi sare oo loo qabo bamgareynta, gaar ahaan sifeynta biyaha, xakameynta kiimikada daadatay, warshadeynta sibidhka, beerashada iyo kor u kaca warshadaha xayawaanka.
Pumice ee daryeelka shakhsi ahaaneed
Faahfaahinta Lifaaqyada Pumice-stone-Alaab-iibiyaha-Indonesia
Baararka saabuunta bamka
Pumice waxa loo isticmaalay walxo ahaan daryeelka shakhsi ahaaneed kumanaan sano.
Waa walxo xoqan oo loo isticmaali karo qaab budo ah ama dhagax ahaan si looga saaro timaha ama maqaarka aan loo baahnayn.
Masaaridii hore daryeelka maqaarka iyo quruxda ayaa ahaa muhiim waxaana si weyn loo isticmaali jiray qurxinta iyo qoyaanka. Mid ka mid ah isbeddellada caadiga ah ayaa ahaa in dhammaan timaha jirka laga saaro iyadoo la isticmaalayo kiriimyada, mandiilayaasha iyo dhagxaanta bamka.
Pumice ee qaabka budada ah waxay ahayd qayb ka mid ah daawada cadayga ee Rooma hore.
Daryeelka ciddiyaha ayaa aad muhiim ugu ahaa Shiinaha qadiimiga; cidiyaha ayaa lagu qurxiyay dhagxaanta xabagta, sidoo kale waxaa la isticmaali jiray dhagxaanta bamka ah si meesha looga saaro calaacalaha.
Waxaa lagu ogaaday gabayga Roomaanka in pumice loo isticmaalay in laga saaro maqaarka dhintay ilaa 100 BC, iyo inta badan ka hor.
Waxa la isticmaalayey wakhtiyo badan ilaa waagaas, oo ay ku jirto Xiligii Fiktooriya.
Maanta, qaar badan oo ka mid ah farsamooyinkan ayaa weli la isticmaalaa; pumice ayaa si weyn loo isticmaalaa sida maqaarka maqaarka ka baxa. Inkasta oo farsamooyinka timuhu ay soo baxeen qarniyo badan, walxo xoqan sida dhagxaanta bamka ayaa sidoo kale weli la isticmaalaa.
“Dhagaxaan bamka leh” ayaa inta badan lagu isticmaalaa goobaha qurxinta inta lagu jiro habka pedicure si looga saaro maqaarka qalalan iyo maqaarka hoose ee cagta iyo sidoo kale calluses.
Bumiis si fiican loo shiiday ayaa lagu daray dawada cadayga qaarkood si poliish ah, oo la mid ah isticmaalka Roomaanka, oo si fudud u soo saara huurada ilkaha ee dhisma. Daawada cadayga noocan oo kale ah aad bay u baabi’inaysaa isticmaalka maalinlaha ah.
Pumice sidoo kale waxaa lagu daraa nadiifiyeyaasha gacmaha ee culus (sida saabuunta lava) sida xoqid khafiif ah.
Qaar ka mid ah noocyada qubayska boodhka chinchilla ayaa lagu qaabeeyay bambo-boore.
Farsamadii hore ee quruxda iyadoo la isticmaalayo pumice ayaa weli la shaqeeyaa maanta laakiin beddelka cusub ayaa sahlan in la helo.
Bar ee dhagax adag
Dhagaxa bamka, oo mararka qaarkood lagu dhejiyo gacanta, waa qalab wax ku xoqid oo wax ku ool ah oo meesha looga saaro nuuradda, miridhku, faraantiyada biyaha adag, iyo wasakhyada kale ee ku yaala qalabka weelka ee guryaha (tusaale, musqulaha).
Waa hab degdeg ah marka loo eego waxyaabaha kale sida kiimikooyinka ama khalka iyo baking soda ama borax.
Ciidda wanaagsani waxay u baahan tahay biyo ku filan iyo rarista nafaqo iyo sidoo kale cufnaanta yar si ay u oggolaato in si fudud la is dhaafsado gaasaska.
Xididdada dhirtu waxay u baahan tahay in si joogto ah loo raro kaarboon laba ogsaydh iyo ogsijiin oogada iyo ka soo celinta.
Pumice waxay wanaajisaa tayada carrada sababtoo ah sifooyinkeeda dalool, biyaha iyo gaasaska waxaa si fudud loogu qaadi karaa daldaloolada iyo nafaqooyinka waxaa lagu kaydin karaa godadka yar yar.
Qaybaha dhagaxa bamka ah waa kuwo aan dabiici ahayn sidaas darteed ma burburaan oo wax yar ayaa isku urursada.
Faa’iidada kale ee dhagaxan aan organic ahayn waa in uusan soo jiidan ama martigelin fungi ama cayayaanka. Dheecaanku aad buu muhiim ugu yahay beerashada, iyadoo joogitaanka beerista bamka ay aad u fududahay.
Isticmaalka malabku wuxuu kaloo abuuraa xaalado ku habboon dhirta sida cacti iyo succulents maadaama ay kordhiso haynta biyaha ee carrada bacaadka ah waxayna yaraynaysaa cufnaanta carrada dhoobada ah si ay u oggolaato gaadiid badan oo gaas iyo biyo ah.
Ku darida bamka ee carrada waxay wanaajisaa waxayna kordhisaa daboolka daaqsinka maadaama xididada dhirtu ay ka dhigaan jiirarrada kuwo xasiloon sidaa darteed waxay kaa caawinaysaa yaraynta nabaad guurka.
Inta badan waxaa loo isticmaalaa hareeraha waddooyinka iyo godadka waxaana caadi ahaan loo isticmaalaa cowska iyo koorsada golf-ka si loo ilaaliyo daboolka cawska iyo fidsanaanta taas oo hoos u dhigi karta xaddi badan oo taraafikada iyo isugaynta.
Marka la eego sifooyinka kiimikada pumice waa dhexdhexaad pH, ma aha acidic ama alkaline.
Sannadkii 2011-kii, 16% bamka laga qodo gudaha Maraykanka ayaa loo isticmaalay ujeedooyinka dhirta.
Pumice waxay ka qayb qaadataa bacriminta ciidda meelaha ay si dabiici ah uga jirto ciidda sababtoo ah dhaqdhaqaaqa volcano.
Tusaale ahaan, Buuraha Jemez ee New Mexico, Ancestral Puebloans waxay degeen “patches pumice” ee El Cajete Pumice kaas oo ay u badan tahay in uu hayo qadar badan oo qoyaan ah oo ku habboon beerashada.
Pumice ee Dhismaha
Pumice ayaa si weyn loo isticmaalaa in lagu sameeyo shubka khafiifka ah iyo kuwa dahaadhka ah ee cufan cufan.
Hawo ka buuxsamay vesicles ee dhagaxan daloolsan ayaa u adeega sida dahamiyad wanaagsan.
Nooc ka samaysan basbaaska oo la yiraahdo pozzolan ayaa loo isticmaalaa sida wax lagu daro sibidhka waxaana lagu qasaa lime si loo sameeyo shamii khafiif ah, siman, oo malaas u eg.
Noocan shubka ah waxa la isticmaali jiray ilaa wakhtiyadii Roomaanka.
Injineerada Roomaanka ayaa u adeegsaday si ay u dhisaan qubbad weyn oo Pantheon ah oo ay ku kordhinayaan xadiga bamka ee shubka ah ee meelaha sare ee dhismaha.
Waxa kale oo caadi ahaan loo isticmaali jiray sidii qalab dhisme oo biyo-mareenno badan.
Mid ka mid ah isticmaalka ugu muhiimsan ee pumice-ka hadda gudaha Mareykanka waa soo saarista shubka.
Dhagaxan ayaa kumanaan sano loo isticmaali jiray isku dhafka shubka ah waxaana wali loo isticmaalaa soo saarista shubka, gaar ahaan gobolada ku dhow halka la dhigo walxahan foolkaanada ah.
Daraasado cusub ayaa caddaynaya codsiga ballaaran ee budada bamka ee warshadaha la taaban karo.
Pumice waxay u dhaqmi kartaa sidii shamiitada sibidhka ah ee shubka ah waxayna cilmi-baarayaashu muujiyeen in shubka lagu sameeyay ilaa 50% budada budada ah ay si weyn u wanaajin karto cimriga hadana hoos u dhigto qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu sii daayo iyo isticmaalka shidaalka fosil.
Pumice loogu talagalay daawada hore
Pumice waxaa loo isticmaali jiray warshadaha daawada in ka badan 2000 oo sano. Daawadii hore ee Shiinaha waxay adeegsan jirtay bamka dhulka oo ay weheliso mica dhulka la dhigo iyo lafo fossil ah oo lagu daray shaaha si loo dejiyo ruuxa.
Shaahaan waxaa loo isticmaali jiray daawaynta dawakhaad, lalabo, hurdo la’aan, iyo xanuunada welwelka. Nuugista dhagaxyadan la jajabiyey ayaa dhab ahaantii awooday inay jilciso qanjidhada naaska waxaana markii dambe loo adeegsaday maaddooyinka kale ee dhirta si loogu daaweeyo kansarka xameetida iyo dhibaatooyinka kaadida.
Daawada reer galbeedka, laga bilaabo horraantii qarnigii 18-aad, bamka waxaa lagu rusheeyey joogteynta sonkorta iyo maaddooyinka kale ayaa loo isticmaalay in lagu daaweeyo boogaha inta badan maqaarka iyo kornea.
Isku-darka kuwan oo kale ah ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu caawiyo nabarrada nabarrada si caafimaad leh. Qiyaastii 1680-kii waxa uu xusay dabiici-yaqaan Ingiriisi ah in budada pumice loo isticmaalay si kor loogu qaado hindhisada.
Previous post: Izvoznik plovca
Next post: Exportador de piedra pómez